1.Yenzelwe ukubhola ngekhonkrithi, emba udongwe lwasemva kwendlu kunye nokulungiswa kwegadi.
Iibhendi ze-2 zokutshintsha ngokutsha i-hammer yombane.
● Ukusetyenziswa kweejackhammers zombane, izaphuli okanye ihammer ejikelezayo.
● Uhlobo lwentloko: Point / Flat / Gouge
● Uhlobo lweShank: Hex Shank 0810
● Ubude: 260-1000 mm (Ubungakanani obuqhelekileyo) - Inokwenziwa ngokwezifiso.
● Ububanzi: 17mm
1. Universal ehambelanayo kufanelekile kakhulu izando zokudilizwa kunye nezinye izando zejack ukulungiselela i hex 0810 shank. Yomeleza ubunzima kunye nokuqina kwisiseko sesiqhelo sohlobo lwe-chisel ukuze kube nzima ukwaphuka. Ingasetyenziselwa izixhobo zamandla njengeBosch, Hitach, Makita, Matabao, Hiltic njl.
2. Ukucanda ukukhanya kunye nokusika iithayile, udaka, iikhompawundi kunye nezinye iimveliso zokwakha; Ilungele ukususa izixa ezikhulu zezinto.
3. Uyilo olude lomqheba luvumela ukucocwa kuzo zonke ii-angles zomsebenzi olula.
4. Yenziwe ngensimbi ephezulu eyenziweyo kunye nobushushu obuphathwe ngentsimbi yokuqina okuzinzileyo.
5. I-chisel inokusetyenziswa ngesando sombane kwaye isebenza ngokubanzi kwaye inemingxunya ephezulu yokulinganisa, isixhobo se-groove kukhonkrithi kunye nodonga lwezitena. Iimveliso zethu zibandakanya i-chisel echaziweyo, i-chisel ethe tyaba, i-chisel yomhlakulo, i-gouge kunye ne-groove chisel. Ubude be-chisel bunokukhethwa ngokweemfuno zabathengi.
Inqaku lesisi 17 * 260
Igouge chisel 17 * 280
Iflethi / Ebanzi I-chisel yeflethi 17 * 280 * 100
Chisel i-SDS iMax ebonisiweyo
Chisele i-SDS NGOKUDLULA
Iitshisi kunye neGouges
Izixhobo zokuKrola amatye